आजबाट पाँच न्यायाधीश पदमुक्त
उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक »	एमाओवादी दलको नेतामा प्रचण्ड »	ब्यारेकमा अख्तियारको छापा »	Thursday, Apr 17, 2014	आजबाट पाँच न्यायाधीश पदमुक्त
नारायण काफ्ले/नयाँ पत्रिकाकाठमाडौं, १९ मंसिरसर्वोच्च अदालतमा बुधबार एकैदिन पाँचजना न्यायाधीश पदमुक्त हुने भएका छन् । नियुक्तिका मितिले बुधबारबाट नै उनीहरूको पदावधि सकिए पनि शपथ र अदालतको हाजिरी रेकर्डअनुसार २२ मंसिरबाट मात्र पदावधि सकिने न्यायपरिषद्ले जनाएको छ । न्यायपरिषद् सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले भने, '२२ मंसिरसम्म उहाँहरूको पदावधि रहन्छ, त्यतिञ्जेलसम्म केही होला ।' तर, पदमुक्त हुन लागेका स्वयं अस्थायी न्यायाधीशलाई समेत परिषद्ले यो विषयमा जानकारी दिएको छैन । एक अस्थायी न्यायाधीशले भने, 'यो विषयमा मलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन ।'नियुक्तिका मितिले न्यायाधीशहरू वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रा.डा. भरतबहादुर कार्की र कमलनारायण दासले अवकाश पाएका हुन् । अर्का अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीले पनि ९ माघबाट अवकाश पाउँदै छन् । अस्थायी नियुक्ति पाएका न्यायाधीशको स्थायी हुन नसकेपछि दुईवर्षे कार्यकाल सकिई उनीहरू पदमुक्त भएका छन् । अध्यादेश जारी गरी स्थायी गर्ने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएपछि पाँच अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त भएका हुन् । अस्थायीमध्येका एक न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीले भने गत बिहीबार नै राजीनामा दिएका थिए । माघमा अवकाश पाउने सूचीमा रहेका न्यायाधीश वस्ती ९ माघ ०६५ मा सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । उनीलाई यसअघि पनि दुई वर्षका लागि अस्थायी कार्यकाल थपिएको थियो । बिहीबार राजीनामा दिएका उप्रेतीको पनि दुई वर्ष थपिएको थियो । अवकाश पाएका न्यायाधीश उपाध्याय २१ मंसिर ०६७ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा आएका उनी स्थायी नभए पुनः पुनरावेदनमै फर्किनेछन् । अर्का अस्थायी न्यायाधीश भट्ट पनि २१ मंसिर ०६७ मै सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए । भट्टलाई पुनरावेदनकै मुख्य न्यायाधीशबाट ल्याइएको भए पनि उमेर हदका कारण उनी पुनरावेदनमा र्फकने सम्भावना अब छैन । न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि २१ मंसिर ०६७ मै सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए । पुनरावेदन अदालत पोखरामा मुख्य न्यायाधीशमा कार्यरत रहँदा उनलाई सर्वोच्च ल्याइएको थियो । स्थायी नभएपछि उनी पनि पुनरावेदन र्फकनेछन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका प्रा. डा. कार्कीले २२ मंसिर ०६७ मा सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका थिए । अवकाश पाएका न्यायाधीश दास पनि २१ मंसिर ०६७ मै सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । यसअघि एकपटक संसदीय सुनुवाइ भई अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाको हकमा स्थायी नियुक्तिमा सुनुवाइ गर्नुनपर्ने माग दाबीसहित दायर भएको रिटमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि कानुनी रूपमा स्थायी गराउने ढोका बन्द भएको थियो । राजनीतिक स्तरबाट अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउने विषयमा समेत विवाद भएपछि उनीहरूले अवकाश पाएका हुन् । धारा १५५ लाई बाधा-अड्काउ फुकाउमार्फत संशोधन गरी सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन सरकारले राष्ट्रपतिलाई गरेको पत्रचारविरुद्ध समेत सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सो रिट अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
मंगलबार सुनसान थियो सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालत मंगलबार सुनसान थियो । सधैँ चार बजेसम्म इजलासमा व्यस्त हुने सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीश मात्र होइन स्थायी न्यायाधीश पनि फुर्सदिला थिए । तर, मंगलबार नै अस्थायी न्यायाधीशको इजलासको अन्तिम दिन थियो । मंगलबार दुई बजे सर्वोच्चका सबै इजलासका ढोका बन्द थिए । अदालत सुनसान थियो । एक इजलास अधिकृतले भने, 'सर्वोच्च आज नौलो लागिरहेछ । मुद्दा हेर्ने कुनै मुड छैन । एक अस्थायी न्यायाधीशले केही पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने, 'हामी जादै छौँ भन्दा पनि संक्रमणकालमा न्यायालय मजबुत हुनुपर्ने हो, नियतवश न्यायालयलाई कमजोर पार्न लागेको अनुभव भइरहेको छ ।' अस्थायी न्यायाधीश सबैले अवकाश पाए सम्भवतः इतिहासमै सबैभन्दा कम न्यायाधीश सर्वोच्चमा रहन्छन् ।मंगलबार करिब दुई बजेसम्म सामान्य एक/दुई मुद्दा सुनुवाइ गरी सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सचिवालयछेउ बैठक कक्षमा समय बिताएका थिए । २ः३० बजे स्थायी न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की र अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्ती र भरतबहादुर कार्की आ-आफ्नो च्याम्बरमा आएका थिए । तर, त्यसपछि उनीहरू एकैछिन कार्यकक्षमा बसेर घरतर्फ लागे । अस्थायीमध्येका वैद्यनाथ उपाध्याय तीन दिनदेखि बिदामा छन् । सर्वोच्चमा स्थायी नभए उनी पुनरावेदन अदालतमा र्फकनेछन् ।
लगानी विविधीकरणबाट समृद्धि हत्केलामै बैंकिङ
अब भर्चुअल बैंकिङ
लहर मर्जरको गाउँगाउँ पुग्नेछ बिमा १० वर्षपछि पेट्रोलियम: मूल्य प्रक्षेपण
द्वन्द्वका मुद्दा आयोगमा लग्न दलहरू सकारात्मक
यस्ता पो आए चुरोट र गुट्खा
ग्रान्डीमा रगतमा पनि चर्को कमिसन
ऋषिले लिएको अन्तर्वार्ता भाइरल डा. भट्टराईसित क्रिकेटका कुरा विमानभित्रै एयरहोस्टेस बुरुक–बुरुक महेन्द्रले रोके भारतको खतरनाक प्रस्ताव एउटै ओछ्यानमा पतिपत्नी र प्रेमिका यस्तो थियो ओसामाको निजी जीवन २० वर्ष कान्छीसँग मस्ती गर्दै लारा सभासद् मिलन राजवंशी भन्छिन् बिहेसम्म भर्जिनिटी जोगाएर राख्नेछु पाँच सय डलर लिएर गएको थिएँ अस्ट्रेलिया कालीबहादुरका किस्सा – २ फिचर/ अन्तर्वार्ता विकासका लागि भिजन, प्यासन र एक्सन
अबको दशक आर्थिक एजेन्डासहितको नयाँ शक्तिको
विकास निर्माणको मामलामा दलहरू प्रतिबद्ध नरहेको आरोप लाग्ने... [More...]
स्थानीय चुनावको रोइलो
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सकिएलगतै नयाँ संविधानको स्वर जति चर्को थियो, अहिले त्यो बिस्तारै मत्थर हुँदै छ र... [More...]